Famokarana ranon-javatra sy fametahana masinina famehezana - mpamokatra masinina mameno ranoka sy mpamokatra masinina, mpamatsy
Famenoana ranon-javatra sy fametahana tombo-kase HGS-240 (P15)
Fampisehoana sy fisongadinana Fahaiza-manao avo, hafainganam-pandeha, avo lenta, ary mpanara-maso mandroso. Fanaraha-maso ny hafainganam-pandehan'ny fiovam-po tsy misy dingana. Fanaraha-maso maotera Servo. Fifanarahana amin'ny masinin'olombelona. Fihetsiketsehana sarimihetsika Servo. Ny fanoloana ny bobongolo sy ny fanitsiana ny halavany dia mety sy mora ampiasaina. Fanalana mandeha ho azy, fanapahana horonantsary ary aforeto. Izy io dia manana fiasan-dàlana mifanaraka tsara sy ratsy amin'ny fitaovana photoelectric. Satria fisaka ny fanambanin'ny tavoahangy, dia mahazaka ...
Famenoana ranon-javatra sy fametahana famehezana HYLGX-2
Andalana famonosana e-ranon Ity tsipika famonosana ity dia misy latabatra famahanana tavoahangy, milina famenoana, milina fametahana, milina fanoratana. Izy io dia natao manokana ho an'ny famonosana e-ranoka. Ny tsipika iray manontolo dia natao araka ny fenitry ny GMP, ny faritra rehetra mifandray amin'ny fitaovana dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Ary azo ampiharina amin'ny karazana tavoahangy isan-karazany izy io. Fitaovana mety tsara izy io avy amin'ny indostrian'ny cosmetika fivarotan-doha simika. 1.Linear type, ny milina tsirairay dia afaka mihazakazaka tsy miankina, azo ahitsy ho an'ny vario ...
Fampisehoana sy endri-javatra Izy io dia mandray ny fifehezana PLC sy ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha tsy miovaova. Ny fizotran'asa toy ny tsy famafana, ny plastika, ny famenoana, ny fanontana nomerao batch, ny indentation, ny totohondry ary ny fanapahana dia vitan'ny programa ho azy. Izy io dia mandray fitaovana fampifangaroana masinin'olombelona, ​​izay misy fiasa tsotra. Ny famenoana dia tsy mitete, miboiboika ary be loatra. Ireo singa mifandray amin'ny fanafody dia samy mandray fitaovana vy tsy misy fangarony, izay mifanena amin'ny GMP ...